Ku saabsan - Alietc.com
Ku saabsan Alietc.com
Suuqa Calietc B2B ee si guul leh u keena iibsadayaasha, alaab-qeybiyeyaasha iyo soosaarayaasha adduunka oo dhan, si wadajir ah hal madal oo firfircoon.
Alietc wuu ka duwan yahay suuqyada kale ee sida wanaagsan loo yaqaan ee suuqyada dijitaalka ah sida Alibaba, Amazon, Taobao, ugu horrayn maxaa yeelay waxay cadeysay cillad ka timaad dhammaan meelahaas oo laga fogaado inay khaladaadkaas sameyaan.
Faa'iidada ugu weyn ee Alietc waa tan oo aan laga qaadin wax lacag ah macaamil xawaalad, sidaa darteed iibsadayaasha, alaab-qeybiyeyaasha iyo soo-saareyaasha waxay xoogga saari karaan qadka hoose ee dhabta ah iyagoon ka walwalayn bixinta guddiga.
Halkii uu komishanku ku dallaci lahaa dhammaadka macaamil xawilaadda, Alietc wuxuu ku dallacayaa lacag aan caadi ahayn midkoodna liistada alaabada ama diiwaangeliya si uu u bixiyo soo-saarka alaabooyinka iibka ah.
Waxaa jira laba sababood oo loogu talagalay ajuuradaas. Marka hore, waxay hubisaa in kuwa liiska ama soo bandhiga wax soo saarka ay yihiin kuwa run ah oo ku saabsan sameynta ganacsiga. Midda labaad, waxaan rabnaa inaanu u ilaalino kharashyada isticmaalayaasha madal ugu yaraan. Tusaale ahaan, isbarbar dhig dhigyada baakooyinkayaga kuwa kuwa Amazon ee, celcelis ahaan, ku dallaca qiyaastii 13% qiimaha iibka. Ma dooneynno in ajuurada ay noqdaan carqalad ama mamnuuc marka laga hadlayo sameynta heshiisyada, waxaan rabnaa inay noqdaan dhiirrigelin!
Alietc kaliya kuma siineyso masraxa oo kuu daa adiga, adeegsadeha, inuu qabto shaqada adag oo dhan. Alietc waxay si firfircoon uga shaqeysaa inay dadka sida naftaada oo kale ku keento masraxa, iyada oo adeegsi ballaadhan loo adeegsado SEO dhammaan badeecooyinka la taxay. Alietc waa goob firfircoon oo saafi ah oo si sahlan maxaa yeelay waxay soo jiidataa adeegsadayaasha si dhab ah uga go'an samaynta ganacsi wanaagsan iyo sameynta xiriir wada-shaqeynaya muddo dheer.
Waxaan sidoo kale sheegnay in kani yahay 'suuq is-dhexgal'. Tan macnaheedu waa waxaan abuurnay beel ganacsi halkaas oo wada xiriirka wanaagsan uu fure u yahay guusha. Wadahadalkaasi kaliya kuma koobna inuu sameeyo heshiisyo waaweyn, laakiin sidoo kale wuxuu uga tagayaa jawaab-celin si loo arko dhammaan. Dhiirrigelinta soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaashu waa in ay dhisaan sumcad xumo tayada iyo isku halaynta, halka kuwa wax iibsanaya bartilmaameedka ay tahay in lagu dhammaystiro heshiisyada si xirfad iyo dhakhse leh, ugu yar ee carqaladeynta.
Hal B2B SIGITAL Suuq Suuq, 105 Luuqadood oo Kala Duwan
Isbeddellada joogtada ah ee teknolojiyadda iyo faa'iidooyinkeeda kala duwan ayaa u saamaxday ALIETC inay ku shaqeyso 105 websaydh shabakadeed oo leh 105 luqadood oo kala duwan, oo ay ku jiraan Shiinaha, Jarmalka, Carabiga, iyo Faransiiska.
Fikradda ka dambeysa qaabkan luqadaha badan ee luqadaha badan ku hadla waa in la sameeyo wax iibsashada iyo soo saarista badeecada si aad u sahlan ugana hufan qof walba, jinsiyad kasta ha noqotee.
Markuu alaab-qeybiyeha soo dhejiyo badeecad, sharraxaaddiisa si toos ah ayaa loogu turjumidoonnaa 105 luqadood oo kala duwan, 105 boggood oo shaqsiyeed.
Nidaamkan dhaqsaha badan, habka otomatiga ah wuxuu ku dambayn doonaa soo jiidashada macaamiil aad u tiro badan oo ka kala imanaya dalal kala duwan oo daafaha dunida ah, sidaas awgeedna jidka u xajinaya guusha laga gaadho suuq sarre oo si guul leh u diiradda saaraya muhiimadda ay leedahay in la gaadho saldhigyada isticmaaleyaasha dhaqammada badan.
Waxaad ka ogaan kartaa faa'iidooyinka buuxa ee Calietc halkan:
Dharka ilaa dhoobada, alaabada guryaha lagu ordo, qalabka elektarooniga ilaa waxkastoo kale, wax alla wixii aad soo saartid, furaha guusha ganacsigaaga waa helitaanka helitaanka dhabta ah, diyaar u ahaanta iyo iibsashada alaabadaada.
Akhri wax dheeraad ah…
Haddii aad ka ganacsato alaabada la soo saaray ama alaabta ceyriinka ah, ku soo biirista suuq geynta dijitaalka ah ee Alietc waxay u fiicnaan kartaa ganacsiga oo keliya. Haddii aad ka ganacsato alaabada macmiilka sida alaabada lagu ciyaaro, dharka ama maacuunta jikada, ama aad ku ganacsato alaabta ceeriin sida bauxite iyo potash, ilaa dharka iyo balaastigga.
Haddii aad raadineyso inaad iibsato alaabada, markaa xaqiiqdii waad timid meesha saxda ah. Alietc waa "Aladdin's Cave" oo ah uun wax soo saar mala awaal ah ama alaab ceeriin ah oo aad qiyaasi karto, iyo inbadan oo aadan xitaa ogeyn inay jireen.